Ukubhema Nokuvungula Kuthinta Kanjani Isifuba Somoya - i-GAAPP
Ukubhema nokuvota nge-Asthma: Izimbangela, Izimbangela nokuningi
Ikhaya>Ukubhema nokuvota nge-Asthma: Izimbangela, Izimbangela nokuningi
Ukubhema nokuvota nge-Asthma: Izimbangela, Izimbangela nokuningiIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:27:56+01:00
Sonke siyazi ukuthi ukubhema akulungile empilweni yakho futhi kulimaza amaphaphu akho, kanti ucwaningo luye lwabonisa ukuthi lo mkhuba ungenza i-asthma yakho ibe yimbi kakhulu.
Abanye ababhemayo baphendukele ku-e-cigarettes ukubasiza ukuthi bayeke kodwa manje sekukhona ucwaningo olukhulayo lokuthi ukusebenzisa i-e-cigarettes (eyaziwa ngokuthi vaping) nakho kuyingozi empilweni yamaphaphu.
Ngenkathi kungekho bufakazi obucacile bokuthi ukubhema noma ukuqhuma ngqo kubangela i-asthma, kubonakala sengathi bobabili bangenza i-asthma yakho ibe yimbi kakhulu, ikhulise ubungozi bokuhlaselwa okunzima kakhulu nokulawulwa kwesimo okumpofu.
Ukuvumba nesifuba somoya
Ama-e-cigarettes asebenzisa ithuluzi elenziwa ngebhethri ukushisa isixazululo esiqukethe i-nicotine, flavourings nezinye izinto ozihogela njengomphunga noma i-aerosol, kunokuba ubheme. Kubhekwe njengokungenabungozi njengokubhema osikilidi ngoba aqukethe amakhulukhulu amakhemikhali ayingozi atholakala entuthu kagwayi.
Kodwa-ke, i-vaping ubuchwepheshe obusha ngokwengeziwe futhi ososayensi basacwaninga ukuthi iphephe kangakanani empilweni yethu. Izifundo eziningi seziqala ukukhombisa ukuthi ukuqhuma kungakhuphula ukuvuvukala ezindleleni zomoya futhi kubangele ubunzima bokuphefumula obungaqinisa izimpawu ze-asthma futhi kubangele ukuhlaselwa yisifuba.
Ucwaningo olwenziwa e-University of California luthole ukuthi ukuqhuma kwenyusa ubungozi besifo samaphaphu esingamahlalakhona kubandakanya nesifuba somoya. Ngokusho kwe- ucwaningo, abasebenzisi be-e-cigarette babenamathuba angaba ngu-30% okuba nesifo esingalapheki samaphaphu ngenkathi ababhemayo bakagwayi bandisa ingozi yabo ngo-160%.
Okunye i-US ucwaningo Uthole ukuthi abafundi besikole samabanga aphakeme abaphefumulayo babe nengozi enkulu yokuhlaselwa yisifuba somoya futhi bebesengozini yokuphuthelwa isikole ngenxa yezimpawu ezinzima zesifuba somoya.
Ukuhwamuka kubangela kanjani izimpawu zesifuba somoya
Izizathu zokuthi ukuqhuma kwezimpawu ze-asthma kufaka:
Amakhemikhali aphambili kuma-e-cigarettes, njenge-propylene glycol nemifino glycerine, axhunyaniswe nokukhwehlela okwandayo, uketshezi lwamafinyila, ukuqina kwesifuba kanye nokwehla kokusebenza kwamaphaphu, konke lokhu okungenza i-asthma ibe yimbi kakhulu.
I-Vaping ingacasula imigwaqo yomoya yamaphaphu, yenze amathuba okuhlaselwa yisifuba somoya.
Ucwaningo ixhume ezinye izithasiselo ezinamakha ku-e-cigarettes ekubangeleni ukulimala kwamangqamuzana ezindleleni zomoya ezenza isifuba somoya sibe sibi kakhulu.
Okukodwa okuphelele cwaningo kwabasebenzisi be-e-cigarette abangaphezu kuka-19,000 bathole imiphumela emibi ejwayelekile ehlanganisa ukukhwehlela nomphimbo owomile, okungenza i-asthma ibe yimbi kakhulu.
I-Vaping ingasiza amabhaktheriya abangela inyumoniya ukuba anamathele kumaseli agudle imigwaqo yomoya, adale umonakalo omkhulu emaphashini. Abantu abane-asthma bangaba sengozini yalokhu.
I-Vaping ingalimaza ikhono lamaphaphu lokulwa nokutheleleka, inyuse ubungozi bokuhlaselwa yisifuba somoya okunzima kakhulu.
Ngabe ukuqhuma kwesibili kuthinta i-asthma?
Ukuphefumula kwesandla sesibili - ukuphefumula emsini womuntu osebenzisa i-e-cigarettes - nakho kungaba nemiphumela eyingozi kubantu abane-asthma.
A cwaningo eshicilelwe ngo-2019, ngokwesibonelo, ithole ukuthi intsha enesifuba somoya eye yahlaselwa umhango wesikhwama se-e-cigarette inamathuba angama-27% okuthi ibike ukuthi ihlaselwe yisifuba somoya ngonyaka owedlule, uma iqhathaniswa nalabo ababengadalulwanga.
Ukubhema nesifuba somoya
Ukubhema kulimaza amaphaphu ngakho kuyingozi kakhulu ukubhema uma une-asthma. Kunamakhemikhali angaphezu kuka-7,000 entuthu kagwayi kanti okungenani angama-250 aziwa njengayingozi. Lapho uhogela intuthu kagwayi, lezi zinto eziyingozi ziyacasula futhi zilimaze imigudu yakho yomoya, zikwenze uthambekele kakhulu ekuqhumeni kwesifuba somoya.
Ingabe ukubhema kungadala umdlavuza?
Abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi ukubhema kubanga ngqo isifuba somoya. Kodwa-ke, kukhona ucwaningo nobufakazi bendatshana obukhombisa ukuthi umkhuba wokubhema wenza i-asthma ibe yimbi kakhulu. Nazi ezinye zezindlela ezingakhulisa ngayo i-asthma:
Ukubhema kudala ukukhiqizwa kwamafinyila emaphashini, okuholela ekukhwehleleni.
Amakhemikhali entuthu kagwayi alimaza izicubu zamaphaphu.
Izinhlayiya zentuthu kagwayi ziyacasula futhi zihlale ngaphakathi kolwelwesi lwezindlela zomoya, zidale ukuthi zivuvuke futhi zibe mincane. Lokhu kuholela ekuqineni kwesifuba nokuqina kwesifuba.
Intuthu kagwayi ilimaza izakhiwo ezincane ezinjengezinwele emigwaqweni yomoya ebizwa nge-cilia, ekhukhula uthuli kanye namafinyila ezindleleni zomoya. Lokhu kusho ukuthi uthuli namafinyila kunqwabelana ezindleleni zomoya, kukhulisa i-asthma yakho.
Ukulimala kwamaphaphu okubangelwa ukubhema kwenza i-asthma yakho ingasabeli kakhulu emithini.
Ngabe ukubhema ugwayi wesibili kuyayithinta i-asthma?
Noma ungabhemi, ukuvezwa intuthu kagwayi kungenza i-asthma yakho ibe yimbi kakhulu. Intuthu kagwayi oyisigaxa siyinhlanganisela yentuthu enikezwa usikilidi oshunqayo nentuthu ekhishwa yilowo obhemayo.
Ukuphefumula lokhu kuzocasula amaphaphu akho, okuholele ekukhwehleleni, amafinyila amaningi, ukungaphatheki kahle kwesifuba kanye nengozi yokuhlaselwa yisifuba somoya. Alikho izinga elingenabungozi lokuvezwa intuthu kagwayi futhi ngisho nokuvezwa okuncane kungaba yingozi empilweni yokuphefumula.
Ungakugwema ukubhema intuthu kagwayi ngokuthi:
Ukungavumeli abantu ukuthi babheme endlini yakho noma emotweni yakho - ngenhlonipho ubacele baphumele ngaphandle.
Buza ngesizotha abantu ukuthi bangabhemi eduze kwakho. Uma kunesidingo, chaza ukuthi une-asthma futhi ukuvezwa intuthu kagwayi kwenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu.
Ingabe ukubhema kuyayilimaza ingane yami?
Izingane ezihlala nabantu ababhemayo futhi eziphefumula ngentuthu kagwayi, zingaba namathuba okuhlaselwa yisifuba somoya futhi zihlaselwe kaningi futhi kanzima. Lokhu kungenxa yokuthi amaphaphu ezingane awakaqedi ukukhula futhi anemikhakha yomoya emincane, amaphaphu namasosha omzimba. Ukuvezwa yintuthu kagwayi kungacasula amaphaphu engane, kuyenze ikhiqize amafinyila amaningi futhi kube lula ukungenwa yizifo ezenza izimpawu zesifuba somoya zibe zimbi kakhulu.
A cwaningo kusuka e-University of Cincinnati uphinde wathola ukuthi intsha engabhemi ebiphila nomuntu obhemayo inamathuba amaningi okuthi iphelelwe umoya. Babuye bathambekele kakhulu ekuphefumuleni ngesikhathi noma ngemuva kokuzivocavoca futhi babe nokukhwehlela ebusuku.
Ingabe ukubhema kungalimaza ingane yami engakazalwa?
Kukhona ingcebo ye- ubufakazi ukukhombisa ukuthi ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa kuyingozi enganeni engakazalwa yomama. Lapho umama ebhema, ubeka ingane yakhe engakazalwa kumakhemikhali ayingozi entuthu kagwayi ngomgudu wayo wegazi.
Izingane ezizalwa ngomama ababhemayo lapho bekhulelwe zisebenza kabi noma zibambezelekile ukusebenza kwamaphaphu kanye nengozi enkulu kakhulu yokuthola i-asthma. Ucwaningo kukhombisa nokuthi ukubhema ngenkathi ukhulelwe kwandisa ubungozi bokuzalwa ngaphambi kwesikhathi kanye nesisindo sokuzalwa esiphansi.
Siza ukuyeka ukubhema nokuqhuma
Uma une-asthma, ukuyeka ukubhema kungaba nomthelela omuhle kakhulu ezimpawu zakho nasempilweni ejwayelekile. Ngenxa yesimo sokulutha se-nicotine esitholakala kugwayi nakwemikhiqizo evuthayo, kungaba nzima ukuyeka ngaphandle kokuxhaswa.
Amathiphu okusika osikilidi nama-e-cigarettes:
Cela udokotela wakho ukuthi akudlulisele kwinsizakalo yangakini yokuyeka ukubhema ukuthola izeluleko nokusekelwa ngokuyeka ukubhema.
Zama izinsizakusebenza zokufaka esikhundleni se-nicotine ukukusiza ulawule izinkanuko: lokhu kufaka phakathi amabala, ushingamu, iziphuzo kanye nomuthi wokufafaza umlomo namakhala.
Zama izinsiza eziku-inthanethi noma izinhlelo zokusebenza ukukusiza uhlale ukhuthazekile futhi ufunde izindlela zokulawula ukulutheka kwakho.
Udokotela wakho angakwazi ukukubeka imithi yokuyeka ukubhema ukukusiza ulawule izifiso zakho.
Uma ujwayele ukubhema ngemuva kokudla noma lapho uphuza, shintsha inqubo yakho ngemuva kwalezi zimo.
Yenza uhlu lwezizathu zokuyeka bese ubhekisa kulokhu uma uthola izifiso.
Tshela umndeni wakho nabangane ukuthi uyeka ukusekelwa.
Susa wonke osikilidi, ama-e-cigarettes nemikhiqizo yokubhema ekhaya lakho, esikhwameni nasemotweni.
Yenza uhlelo lokuyeka - setha usuku bese unamathela kulo.